» अचम्म देखिँदैछ पूर्वमा अचेल
अचम्म देखिँदैछ पूर्वमा अचेल
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ११:५२
गर्छु, गर्छु भनेर मात्र नहुँदो रहेछ । गर्नेले नभनी गर्छ, नगर्नेले भनिरहन्छ । तर गर्दैन । यस्तै विडम्बनाको शिकार बनेको नगर कुनै छ भने त्यो पूर्वी सिमानाको मेचीनगर नगरपालिका हो ।
यसै साता यो नगरसँग भगिनी सम्बन्ध गाँस्न भनेर बेलायतस्थित फोक्स्टन सिटीका मेयर आए । उनीलगायतको टिम अहिले यो नगर घुमिरहेको छ । यो टोली ल्याउने मान्छे त्यही सिटीका पूर्व काउन्सिलर धनकिरण गुरुङ हुन् । मेचीनगरकै भएका कारण उनलाई आफ्नो ठाउँ बनाउने चिन्ता छ । तर, के गर्नु ? उनलाई जस्तो नगर बनाउने चिन्ता र चासो त्यही नगरका मेयर, कर्मचारीलाई भइदिए कति गज्जब हुन्थ्यो !
भूगोल ठूलो भएर मात्र नहुने रहेछ । त्यस भूगोलको विकास गर्ने नीति र योजना चाहिने रहेछ । यो नगरपालिका भूगोलका आधारमा नेपालभरि नै ठूलो मानिन्छ । तर, काम गर्न भूगोल चाहिँदैन नि ! व्यापारी मेयर विमल आचार्यलाई दिनभरि खैनी माडेर कुर्सीमा बस्ने फुर्सद कहाँ मिल्छ र ? उनका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र खाम्याङ झन् के कम ? क्वाटरमा एक्लै बस्छन् । कारण धेरैले पत्ता लाइसके । इलामबाट सीधै मेचीनगर सरुवा लिएर आए । आउनेबित्तिकै खाना पकाउन राखिएको मान्छेको जागिर खाइदिए ।
इलाम बस्दाको कथा बेग्लै छ । त्यहाँ पनि उनी क्वार्टरमा एक्लै बस्थे । पुगेकै दिन खाना पकाउने मान्छेलाई बिदा दिए र भने, ‘मलाई कोही सहयोगी चाहिँदैन… तिमी जाऊ ।’ त्यसपछिका दिनमा इलामेले उनको चर्तिकला थाहा पाए कि उनी महिलामैत्री मात्र हैन, क्वार्टर प्रेमीदेखि म्यारिज भक्त पनि रहेछन् ।
यो चर्तिकलायता पनि दोहोरिरहेको सुन्ने र देख्नेहरू धेरै छन् । सूचना र जानकारी दिनमा निकै कमजोर र लोभी भएको कुरा बताउने पत्रकार झापातिर धेरै छन् । मागेको जानकारी दिन त के वेबसाइटमा पनि खोजेको बेला केही भेटिँदैन ।
तीनै फोक्स्टन सिटीको निम्तो मान्न ३ महिनाअगाडि मेयर आचार्य पत्नीसहित बेलायत गए । अहिले त्यसको बदलामा उताको टोलीयता आयो । तर, उता जाँदा महिना दिनसम्मको सबै खर्च उनीहरूले गरे । यता भने सुख्खा । उताको टोली आउँदा कक्टेल पार्टी त दिइयो । तर, त्यो फेसबुकमा छताछुल्ल भयो । मेयर, उपमेयरलगायतले नगरपालिकाकै कार्ड भिरेर कक्टेल गरे । अहिले यो विषयले पूर्वीद्वार तातिरहेको छ ।
हाँडी गाउँको जात्रा भनेजस्तै थरीथरीका चर्चा यही नगरमा हुन्छ । केही दिनअघि यही नगरमा शुरु भएको एसियन ग्रामीण पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केक काटेर गरे । तिनै बेलायती पाहुनालाई त्यहाँ बोलाइयो र उनीहरूलाई केक खुवाइयो । ग्रामीण महोत्सव भन्ने अनि केक काटेर उद्घाटन गर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर दिन अहिले महोत्सव आयोजक समितिका अध्यक्ष अर्जुन कार्कीलाई भ्याइनभ्याइ छ । यही विषयलाई लिएर सो समितिका उपाध्यक्षले राजीनामै दिए । उता सोही दिन मुख्यमन्त्रीले एउटा व्यक्तिगत होटलको उद्घाटन पनि गर्न भ्याए । त्यसै दिन अर्को एउटा पसलको उद्घाटन गरे । धेरैले मुख्यमन्त्रीलाई नभेटी सुझाव दिँदै थिए, कमसेकम यस्तो काम त नगर्दिनू नि… धेरै भन्दै थिए, बरु यो समयमा आफ्नो प्रदेशको नाम राख्न लाग्नु नि…।
संकटमा पनि सुमार्गीको अलग स्वार्थ